जागिर Archives - E mechi
ज्योति विकास बैंकले माग्यो ५४ जना कर्मचारी
Posted in जागिर
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकमा ५४ जनाको लागि रोजगारी खुलेको छ । बैंकले माथिल्लो तहका कर्मचारीको माग गरेको छ । बैंकले जारी गरेको सूचना अनुसार २० जना ब्रान्च म्यानेजर माग गरेको छ । उक्त पदमा आवेदन दिन इच्छुक आवेदकको लागि विभिन्न शर्तहरु राखिएको छ । जसमा कम्तिमा ५ वर्ष बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेको लगायत शैक्षिक योग्यता पुगेका आवेदकले आवेदन दिन सक्नेछन् । यस्तै रिलेसनसिप म्यानेजर २० जना माग गरिएको छ । यो पदमा आवेदन दिन योग्य आवेदकले न्यूनतम २ वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गरेको अनुभव आवश्यक पर्दछ भने त्यही अनुसार शैक्षिक योग्यता पनि हुनुपर्ने रहेको छ । मान्यताप्राप्त विश्व विद्यालयबाट इकोनोमिक विषयमा ब्याचलर पास गरेको हुनुपर्ने छ । बैंकले जारी गरेको सूचनामा टे«निङ एण्ड डेभलपमेन्ट प्रमुख १ जनाको लागि रोजगारी खुलेको छ । उक्र पदमा आवेदन दिन चाहने योग्य उम्मेदवारले इकोनोमी विषयमा ड
नेपाली कामदार तत्काल जापान जान नपाउने…
काठमाडौं : नेपाली कामदार तत्काल जापानमा जान नपाउने भएका छन्। जापान रोजगारसम्बन्धी संयन्त्र तयार नभएका कारण तत्कालै कामदार जान सक्ने अवस्था नरहेको हो।रोजगारीका लागि जापानले संरचना निर्माण प्रक्रिया अघिबढाएको छ। भाषाका लागि जापान फाउन्डेसन, सीपका लागि सम्बन्धित व्यवसायको एसोसिएसन ले सीप परीक्षण गर्नेछन्। नेपालका लागि सीप परीक्षणको परीक्षा लिन खुला भएका मध्ये कुनै पनि व्यवसायका एसोसिएसन तयार नभएको बताइएको छ।भाषा र सीप परीक्षामा उत्तीर्णको जापान सरकारले कुनै पनि रोस्टर तयार गर्दैन। आफूले उत्तीर्ण गरेको सीप र भाषाको प्रमाणपत्रका आधारमा जापानी रोजगारदातासँग सम्पर्क गरी रोजगारदाताले पठाएको करार सम्झौतापत्रका आधारमा मात्र सम्बन्धित कामदारलाई भिसा उपलब्ध हुन्छ।तर,जापानकै केही गैरनाफामूलक कम्पनीले भने नेपाल सरका रसँग मिलेर सीप र भाषा उत्तीर्ण गर्ने नेपाली इच्छुक कामदारको रोस्टर तयार गरी उनीहरूलाई
काठमाण्डौ – काठमाण्डौमा जन्मेर यहीँ हुर्केकी ऋचा धमलालाई सानोमा कसैले ठूलो भएपछि के बन्छौ भनेर सोध्दा भन्नुहुन्थ्यो ‘शिक्षिका बन्छु ।’ केही समयपछि ऋचालाई लाग्थ्यो शिक्षिका हैन, डाक्टर बन्छु । त्यसपछिको उहाँको सपना थियो ठूलो भएपछि वकिल बन्ने । तर उहाँले रोज्नुभयो ‘धोबी’ अर्थात लुगा धुने काम । शिक्षिका, डाक्टर र वकिल पेशालाई आफ्नो सपना मान्ने ऋचाका वर्षहरु फेरिएसँगै लक्ष्यहरु पनि फेरिंदै गए । अस्ट्रेलियामा चार वर्षे बीएससी नर्सिङ गरेर नेपाल फर्किएकी ऋचाको हिजोआज लुगा धुने काम नै सपना र बिपना भएको छ । धेरै युवाको सपना हिजोआज अस्ट्रेलिया र अमेरिका हुन्छ । त्यही ठाउँ जानका लागि मरिहत्ते गर्छन् ।तर त्यही देशमा पुगेर ‘स्कोप’ पनि राम्रो भएको विषय बीएससी नर्सिङ गरेकी ऋचाको मन अडिएन । पढाइअनुसारकै काम अस्ट्रेलियामै बसेर गरेको भए कमाइ राम्रो हुन्थ्यो । जिन्दगीले अर्कै लय समातिसकेको हुन्थ्यो होला ।
राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई १९ थरिका भत्ता, तलबबाहेक नै बुझे १३२ करोड
Posted in अर्थ, जागिर
३० चैत, काठमाडौं । सरकारले यस वर्ष सरकारी खर्चमा मितव्ययिता सम्वन्धी निर्देशिका जारी गरेर स्थानीय भत्ता, लुगा भत्ता र महंगी भत्ता बाहेक अन्य सबै प्रकारका भत्ताहरु खारेज गरेको छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले भने अहिले पनि विभिन्न १९ किसिम सम्मका भत्ता बुझिरहेका छन् । सबै सरकारी निकायमा विगतमा प्रदान गर्दै आएको अनावश्यक भत्ता कटौति भएपनि निर्देशिकाको प्राबधान राष्ट्र बैंकमा लागू नभएको प्रीत महालेखा परीक्षकको कार्यालय प्रश्न उठाएको छ । उसले निर्देशिका सार्वजनिक संस्थानमा समेत लागु हुने उल्लेख रहेकाले त्यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएको छ । राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई कर्मचारी सञ्चयकोष, औषधि उपचार कोष, उपदान कोष र कर्मचारी सुरक्षा कोषका अलावा सबै कर्मचारीलाई ८ किसिमका र विशेष समूहका कर्मचारीलाई १९ किसिमका भत्ता उपलब्ध गराएको देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा तलब बाहेक राष्ट्र
डाक्टरहरुको दैनिकी : हाजिर गर्छन्, आन्दोलनमा उफ्रिएरै बेलुकासम्म तलब पकाउँछन् !
Posted in जागिर, राष्ट्रिय समाचार
काठमाडौं । आममानिसमा चलन नै छ, ‘जागिर होस् त सरकारीजस्तो’ । सेवा सुविधा र कामका हिसाबले सरकारी जागिर निजी कम्पनीको जागिरभन्दा सजिलो हुन्छ । निर्धारित समयभन्दा केही ढिलो पुग्ने र समय सकिनु अगावै कार्यालय बाट हिँड्नु, अधिकांश सरकारी कर्मचारीको दिनचर्या यस्तै हुन्छ । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।तर, सेवा सुविधाका विषयमा भने सरकारी कर्मचारी एकजुट हुने गरेका छन् ।उनीहरू सानोभन्दा सानो मागमा पनि आन्दोलनमा उत्रिहाल्छन्। यस्तै काम पछिल्लोपटक सरकारी चिकित्सकहरूले गरेका छन् । विभेदकारी, अन्यायपूर्ण, अवैज्ञानिक चिकित्सक समायोजन भएको भन्दै चैत्र २२ गतेबाट सरकारी चिकित्सक संघ नेपालमा आबद्ध चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूको आन्दोलनले बिरामी चर्को मारमा परेका छन् । तर, सरकारी चिकित्सक भने दैनिक कामकाज छाडेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । यद्यपि, उनीहरू दैनिकरूपमा हाजिर भने गरिरहे
Apr92019 by emechiNo Comments
‘कोरियालाई डिग्री होइन मसल्स चाहिएको छ’
सन् २०१९ मा दक्षिण कोरिया जान कुल ९२ हजार ३ सय ७६ जना नेपालीले आवेदन दिएका छन्। त्यसमध्ये ६३ हजार ४ सय ८७ जनाको उत्पादनतर्फ आवेदन परेको छ। कृषितर्फ २८ हजार ८ सय ८९ जनाले आवेदन दिएका छन्। आवेदन दिएकाको परीक्षा जेठमा हुन्छ। त्यसमध्ये १० हजार ५० जनालाई उत्तीर्ण गराउने भनिएको छ। सन् २००८ देखि अहिलेसम्म नौ ओटा परीक्षा भयो। अहिलेसम्म उत्तीर्ण भएका सबै जना कोरिया गएका छैनन्। हामीले सूचना निकाल्दा नै ‘कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नु कोरियाको रोजगारीको ग्यारेन्टी होइन’ भनेर निकाल्छाँै। कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण हनु भनेको रोजगार आवेदन गर्न योग्य हुनु मात्र हो। परीक्षार्थीहरू हामीले भनेको सुन्दैनन्। आफूले पढेको इन्स्टिच्युटले जे भन्छ, त्यसैको पछाडि कुद्छन्। पहिला फारम भर्‍यो भने पहिला परीक्षा हुन्छ, सजिलो प्रश्न आउँछ, चाँडै जान पाइन्छ भनेर फर्म भर्ने बेला तँछाडमछाड भएको थियो। ईपीएस
Apr62019 by emechiNo Comments
चौवीस हजार तलव खाने यी नायब सुब्बाहरूको सम्पत्ति आधा अर्बभन्दा धेरै
काठमाडौं, २३ चैत । नायब सुब्बा निजामती सेवामा सानो पद मानिन्छ। यिनको तलब २४ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्र छ। तर, अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग लाग्नेमा धेरैजसो सुब्बा नै छन्। ठूलाठूला भ्रष्टाचारमा सुब्बा मुछिएकाले पनि अनियमिततामा उनीहहरू बढी संलग्न रहेको पुष्टि हुन्छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।यातायात व्यवस्था कार्यालय कोसीका तीन लेखापाल (सुब्बा) करोडौंको भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका छन्।लेखापाल सुरेश अधिकारीविरुद्ध ६१ करोड २८ लाखको बिगो दाबीसहित अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ। अर्का लेखापाल देवराज नेपालमाथि ४५ करोड ६१ लाख र रुद्रप्रसाद दाहालमाथि २१ करोड ६३ लाख भ्रष्टाचार अभियोग छ। तीनै जनाको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ।यस्तै अकुत सम्पत्ति आर्जनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका नायब सुब्बा ‘रेडयो अपरेटर’ श्यामकृष्ण च्यामु श्रेष्ठविरुद्ध १४ करोड ६१ बिगोसहितको मुद्दा छ। उनीम
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले माग्यो ठूलो संख्यामा कर्मचारी (सूचनासहित)
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा जागिर खुलेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले अधिकृत र सहायक स्तरमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी माग गरेको हो ।सबै प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले अधिकृत स्तर र सहायक स्तरको पदमा कर्मचारी माग गरेको हो । आवेदन दिनको लागी अनलाइनमार्फत दरखास्त दिन सकिनेछ । ईच्छुकले अधिकृत स्तर र सहायक स्तरको पद ९तह ४०मा आवेदन दिन सक्नेछन् । थप जानकारीको लागी तलको सुचना हेर्नुहोस्
Apr42019 by emechiNo Comments
अमेरिका बसेर जाजरकोटको सरकारी जागिर, नियमित तलब बैक खातामा
सुन्दै अचम्म लाग्ने अमेरिका बसेर जाजरकोटमा जागिर कसरी सम्भव होला ? तर जिल्ला अस्पताल जाजरकोटमा कार्यरत मेडिकल अधिकृत डा. निशराज बस्नेतले विगत एक वर्षदेखि अमेरिका बसेर जाजरकोटको जागिर पकाइरहेको पाइएको छ। स्थानीय प्रशासनले छड्के अनुगमन गर्दा यस्तो अनियमितता फेला पारेको हो। उनी गतवर्ष अमेरिका गएका थिए। २०७३ सालको अन्त्यसम्म उनको साढे १९ दिन संचित बिरामी बिदा थियो। २०७४ बैशाखदेखि यता दुईपटक आएर हाजिर गरेर उनी पुनः अमेरिका फर्किएका थिए। यस वर्ष बैशाख २५ देखि जेठ चार गतेसम्म ११ दिन हाजिर गरेर फर्किएका थिए। पुनः कार्तिक ६ गतेदेखि हाजिर भएका उनी २१ गतेसम्म १६ दिन जिल्ला अस्पतालमा बसेर काम गरेको हाजिरी रेकर्डमा उल्लेख छ। अन्य अवधिमा घरबिदा, सट्टा बिदा, काज, बाटो म्याद उल्लेख गरेर हाजिरी किताब भरेका छन्। घर बिदा लिइसकेर फेरि हाजिर भएपछि मात्र अर्को घरबिदाको बाटो म्याद लिन पाइन्छ तर डा. बस्नेतल
परदेशमा मृत्युसँग संघर्ष : दुबई अस्पतालमा कमलाको बिजोग : आमा पर्खंदै छोरी, सहयोग खोज्दै श्रीमान् (पूरा हेरि सक्दो शेयर गरौ )
यूएई – दुबई अस्पताल । साताै‌ तल्लाको ७१० नम्बर कोठा । यही कोठाको एउटा बेडमा मृत्युसँग संघर्ष गरिरहनुभएको छ, काभ्रे माझीफेदी ७ की कमला गिरी । १२ वर्ष पहिले श्रीमानसँगै काम गर्न आएकी कमला परदेशमा थलिएको डेढ महिना भयो । गएको फागुन १ गते अस्पताल भर्ना भएकी कमलाको एक महिनासम्म होश थिएन । एक महिनासम्म मुढोझैं भएकी कमलाको अहिले होश खुलेको छ । ल्युकेमिया ब्लड क्यान्सर रोगले गलेकी कमलाको उपचारमा पैसा नहुँदा समस्या भएको छ । एक महिनासम्म आईसीयूम कक्षमा उपचार गराएपछि अहिले कमलालाई सामान्य वार्डमा सारिएको छ । जीवनका हरेक क्षणमा सँगै रहने भन्दै १२ वर्षअघि काम खोज्दै कमला र विमल यूएई आउनु भएको हो । श्रीमान् एउटा कम्पनीमा सेल्सम्यानको रुपमा काम गर्नुहुन्छ । कमला पनि श्रीमानको स्पोन्सर भिसामा रहेर कहिले सेल्स् र क्यासियरका रुपमा काम गर्नुहुन्थ्यो । चार वर्ष पहिले छोरी जन्मिएपछि उनको हेरविचा